कनकाईको ,छठ पुजा यसबर्ष भव्य र सभ्य हुने छ । -
Home / Main News / कनकाईको ,छठ पुजा यसबर्ष भव्य र सभ्य हुने छ ।
Lila Jhapali November 13, 2018	Main News, अन्तरवार्ता, फिचर, मनोरञ्जन, विचार Comments Off on कनकाईको ,छठ पुजा यसबर्ष भव्य र सभ्य हुने छ । 109 Views
दिपेन्द्र प्रधान सचिव ः कनकाई छठ पुजा सेवा समिति सुरुङ्गा
तराइका जिल्लामात्रैमा नभएर पहाडका जिल्लाहरुमा पनि छठ पर्वको रौनक भित्रिसकेको छ । झापाको मध्यभागमा अवस्थित कनकाई नगर सुरुङ्गाका छठपर्वप्रेमी ब्रतालुहरुले कनकाई माइको पुर्वी टठमा भव्य पुजा अर्चना र साङ्गित कार्यक्रमका विच छठ पर्व मनाइदै छ । यस बर्षको छठ पर्वका लागि देशका चर्चित साङ्गितिक कलाकारहरुको समेत जमघट हुने भएको छ । कनकाई नगरको छठ पर्वको तयारीको वारेमा कनकाई छठ पुजा सेवा समितिका सचिव दिपेन्द्र प्रधानसग गरिएको कुराकानी ।
१) छठ पर्व भित्रिसकेको छ । खासका यस छठ पर्वको महत्व र सुरुवात कसरी भएको पाइन्छ ?
छठ पर्व नेपाल र भारतका उक्तरीय क्षेत्रमा हिन्दूहरूले मनाउने एक महत्वपूर्ण पर्व हो। यो पर्वमा षष्ठी भगवतीको पूजा अर्चना गरी पुत्र, पति र परिवारको कल्याणको कामना गर्ने गरिन्छ। नेपालको विशेष रुपले तराई९मधेश० क्षेत्रमा श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक यो पर्व मनाइन्छ । यस पर्वको अवसरमा पञ्चमीका दिनदेखि व्रत बस्ने महिला तथा पुरुषले निष्ठापूर्वक पवित्र जलाशयमा स्नान गरी बेलुकीपख दूध, चामल र सख्खरको खीर पकाई प्रसादको रूपमा आफूले खाने र व्रत नबस्ने परिवारका सदस्यलाई पनि ख्वाउने चलन छ । परम्परानुसार छठका दिन साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई जलाशयमा उभिएर पूजासहित अर्घ दिएपछि रातभर नदी तथा तलाउ किनारमा बसी भजनकीर्तन गर्दै भोलिपल्ट सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पुनः अर्घ दिई पूजा विसर्जन गरिन्छ ।यश पर्वमा मुस्लिम समुदायका व्यत्तिले पनि सहभागी हुन्छ र यो पर्व बिधिबत मनाउछ। पवित्र मनले छठ पर्व मनाउँदा पारिवारिक कल्याण, सन्तानसुख तथा मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ ।
२) कनकाई छठ पुजा समितिले यस बर्षको छठ पर्व कसरी मनाउदै छ ।
कनकाई छठ पुजा सेवा समितिले यसबर्षपनि अघिल्ला बर्षकाझैँ कनकाई माइको पुर्वी किनारामा पुजाका लागि सम्पुर्ण तयारी पुरा गरिसकेको छ । स्वागत द्धार निर्माण गरिसकिएको छ भने कनकाई नगरपालिकाको सहयोगमा जेसिभि उपलब्ध गराइएको थियो त्यसले नदिको किनारामा घाट निर्माण गरिएको छ । हामीलाई कनकाई सामुदायिक वन समुहले निशुल्क ट्क्याटर उपलब्ध गराएको थियो भने आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराइको थियो । अघिल्लो बर्षभन्दा यसबर्ष धेरै पुजाका लागि घाटहरु निर्माण गरिएको छ । यसबर्ष ७० बटा पुजाका लागि घाटहरु निर्माण गरिएको छ अघिल्लो बर्ष ६५ बटा घाटहरु निर्माण गरिएको थियो । यसपटक ७ जना पहाडि समुदायले समेत छठ पुजाका लागि घाट बनाउनुभएकोछ । यस पुजा आफ्नो आस्था र श्रद्धामा भरपर्ने भएकोले सम्पुर्ण हिन्दु समुदायले यसको पुजा अचर्ना गर्दछन ।
३) यस पटकको छठ पुजाको थप आकर्षणमा के रहेको छ ।
हामीले प्रचार पनि गरिसकेका छौ । जव हामी छठ पर्वको मुख्य दिन मंगलवार दिनको १२ बजे सुरुङ्गा चोक दुर्गामन्दिरमा जम्मा भएर बजार परिक्रमा पछि कनकाई माइमा जम्मा हुन्छौ त्यहा औपचारिक कार्यक्रम र अस्ताउदो सुर्यलाई अर्घ दिएर पुजा मात्रै गर्दैनौ त्यहा रातभर जाग्राम बसेर राष्ट्रिय कलाकारसग मनोरन्जन पनि लिनेछौ । जसमा काठमाण्डौबाट नाम चलेका कलाकारहरु जोगेन्द्र पानवाला , मुलाको साग , बोकेदाह्री , प्रेम आङ्गदेम्बे , राजेश घतानी स्थानीय कलाकार प्रज्ञा प्रधान र अन्य झापाका चर्चित ब्राण्ड तथा सास्कृतिक टोलीबाट बेजोड नृत्य र गायन प्रस्तुत गर्ने छौ । अघिल्ला बर्षकाझै सुर्य मुर्ति ल्याइएको छ भने पुजा स्थलमा स्वागत द्धार निर्माण गरिएको छ ।
४) पुजा तथा सास्कृतिक कार्यक्रमको व्यावस्थापन र सुरक्षाका लागि कस्तो तयारी रहेको छ ।
प्रथमत हामीले सुरक्षा र अन्य तयारीका लागि ५१ सदस्यीय स्वयम सेवक समिति , २१ सदस्यीय मुल समारोह समिति , १८ वटा उपसमिति र महासचिव खगेन्द्र महत्तोको संयोजकत्वमा मुल पुजा आयोजक समिति गठन गरिसकिएको छ । यसको साथमा इलाका प्रहरी कार्यालय सुरु«ङ्गा , विर्तामोड , सशस्त्र प्रहरी वल टाघनडुब्बाको प्रहरी वलले पनि हामीलाई सुरक्षाका लागि सहयोग रहने छ । विशेषत राष्ट्रिय कलाकारहरुको उपस्थिति रहने भएकोले कार्यक्रममा भीडभाड बढिनै वढ्ने हुदा हामीले सुरक्षाका लाागि कुनै कसर वाकी राखेका छैनौ ।
५) पुजाका लागि आर्थिक प्रवन्ध कसरी गर्नुभएको छ ??
हामीले पुजाका लागि आउने सबै ब्रतालुसमक्ष सहयोग मागेका छौ यसलेमात्रै पुजाका लागि लाग्ने १२ लाख रुपैँयाको एकछेउपनि भेट्दैन । यस क्षेत्रको नगरपालिका , वन समुह , लगायात सबै संघसंस्था र ब्याक्तिगग सहयोग जुटाएर हामीले पुजाको प्रवन्ध गर्दैछौ । यसबाट केहि रकम बचेको खण्डमा हाम्रो कनकाई छठ पुजा सेवा समितिले पाएको र खरिद गरेको ४ कठ्ठा ४ धुर जमिनमा मन्दिर सहितको आफ्नो भवन बनाउदै छौ । हामीले पुजा समितिले यस क्षेत्रमा विभिन्न समयमा सामाजिक सचेतना जगाउने काम रक्तदान लगायातका कामहरु गर्दै आएका छौ यसलाई निरन्तरता दिदैजाने छौ ।
६) पुजालाई थप व्यावस्थित गर्नका लागि के कस्ता क्रियाकलाप गर्दै हुनुहुन्छ ।
हामीले आइतवार यसको प्रचारका लागि तथा यस नगरको सोभाका लागि सरसफाइ गर्दै छौ । हामीविच छठ पुजा शुक्रवारका दिन गोर्बद्धन पुजा गरि शुरु भइसकेको छ । सोमवार खर्ना पुजा गरिदै छ । पुजा स्थलमा कोटीहवनदेखिनै सडक वत्तीको व्यावस्था गरिसकेका छौ भने सास्कृतिक कार्यक्रमका लागि स्टेज कार्यक्रम बनाएका छौ ।
प्रस्तुती लीलाराज झापाली ।
Previous कनकाईमा छठ पुजाको तयारी पुरा
Next बन्द निषेधित नगरी कनकाईमा कस्ले गर्यो बन्द ???